Warbixin: Sidee Somaliland Ugu Jirtaa Dawladaha Afrika Ee Internetka Ka Jaray Dadkooda ? | Himilo Media Group
Hargeysa, 27 Jeeniweri, 2019 (Himilo) – Telefiishanka Euronews ayaa Shalay ku warramay in Dawladaha Afrika qaarkood ay Internetka ka jareen dadweynahooda.
Ilaa 2016kii waxa la diwaangeliyey 371 kiis oo ku waajahan xakameynta Internetka oo intooda badani dhaceen Gu’gii hore 2018.
Waxa lagu macneeyey in dawladuhu u xidheen Internetka sababo ay ka mid yihiin ilaalinta ammaanka qaranka iyo xakameynta baahinta dacaayadaha waxba kama jiraanka ah.
Internet xidhku wuxuu Afrika ka bilaabmay dalka Guinea sannadkii 2007dii oo Madaxweynihii hore ee dalkaasi, Mr. Lansana Conte, uu goo’yey khadka Internetka.
Euronews wuxuu xaqiijiyey in dalalka Chad, Sierra Leone, Ethiopia, Somaliland, Algeria, Togo, Cameroon, Gambia, Uganda, Gabon, Algeria, Morocco, Lybia, Tunisia, iyo Algeria ay jareen khadkii Internetka xiliyo kala duwan oo iskugu jiray saacado, maalmo iyo billo.
Waxa kaloo ku jira warbixinta Euronews shax muujinaysa in:- 2016 la xidhay internetka 75 jeer, 2017 waxa la xakameeyey internetka 108 jeer, halka 2018-kiina Internetka la jaray 188 jeer.
Waxaan shakhsiyan qabaa in aanay Xukuumadda Somaliland marna cabudhin iyo caddaadiska dadkeeda darteed u jarin khadka Internetka, waxaase adeeggan la xiddiday hal mar oo aheyd xilligii doorashada Madaxtooyadu ka qabsoontay Somaliland Bishii November sannadkii 2017kii. Waxaana lagaga gaashaamanayey in saxaafadda bulshada lagu baahiyo natiijooyin sameys ah oo dadka lagu jaho-wareerin karayey. Waxa amarkaas oo ka soo baxay Komishanka doorashooyinku uu qaatay wakhti kooban, waxaanu gaar u ahaa saxaafadda bulshada (Social Media-yaha) oo kaliya ee lama jarin adeegga internetka.
Sidoo kale, Somaliland oo ah dal dimuqraadiyadda baro-dheeraysay reer galbeedka qaarkood markay joogto xornimo u hadalka iyo madax-bannaanida Saxaafadda, kama jirto qalalaase ka oogan dalka gudahiisa sida dalalka Afrikaanka ah ee warbixinta Euronews xustay.